काठमाण्डौंमा ६ लाख ५० हजारको मोटरसाइकल किन्न गएका युवकले जव यस्तो जुक्ति लगाए, मोटरसाइकल धनिले माग्नु पर्यो प्रहरीसङ गुहार ! « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०७६, बिहीबार ११:५४
बैंकमा पैसा छ भनेर ढुक्क नबस्नुस् अर्केले चेक काटेर लगिदिन्छ
तपाई बैंकको एसएसएस सेवा लिन छुटाउनु भएको त छैन ? छुटाएको भए तत्कालै जोडिहाल्नुस् । नत्र बैंकको मौज्दात रकम अरु कसैले लगिसकेको हुनसक्छ । यसरी लगेको पैसा न बैंकलाई थाहा हुन्छ न तपाईलाई ।
चोरिएका मोटरसाइकल फेला
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हराएका १७ मोटरसाइकल फेला पारी आज सम्बन्धित मोटरसाइकलधनीलाई बुझाएको छ । उपत्यकाका ठमेल, नैकाप, बौद्ध, ताल्छिखेल, अनामनगर, बालाजु, भक्तपुर, गौशाला, सोह्रखुट्टेलगायत स्थानबाट हराएका मोटरसाइकल फेला पारी धनीलाई बुझाइएको महाशाखाले जनाएको छ । चोरीका मोटरसाइकल खोजी गर्ने क्रममा ट्राफिक प्रहरीले चोरीमा संलग्न तीन जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ ।
खोजी गरी आज सम्बन्धित धनीलाई यस महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता रविकुमार पौडेलले जिम्मा लगाउनुभएको हो । महाशाखाबाट सबिना तामाङ, गणेश खकुरेल, प्रकाशमान सिंह, भीमप्रसाद दुलाल, तारा भण्डारी, अमित ठकुरी, राजाराम थापा, सुमन राना, सकिन खड्गी, प्रवीण सुवेदीलगायतले आजै मोटरसाईकल बुझेर लैजानुभएको छ । उहाँहरुले मोटरसाइकल खोजी गर्ने प्रहरीहरुलाई धन्यवादसमेत दिनुभयो । चालू आवमा हराएका ११८ मोटरसाइकल फेला पारी धनीलाई जिम्मा लगाएको महाशाखाले जनाएको छ ।